Izithonjana: ziyini, izici, ukwakheka nezingozi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-classic yasebusika ekhombisa ama-movie, uchungechunge, opopayi, njll. Ingabe i- ama-icicles. Lezi yizicucu zeqhwa eziphoqelela emavesini ophahla, amagatsha ezihlahla, izingqimba zomhlaba nezinye izinto eziningi zomhlaba. Imvamisa zenzeka ebusika ngenxa yamazinga okushisa aphansi kanye neqhwa elisindayo. Kwesinye isikhathi zingadalwa ngaphandle kwesidingo seqhwa kanjalo futhi kungadala izinkinga ezinkulu kubantu ngesikhathi sokuwa kwabo.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ama-icicles akhiwa kanjani, yiziphi izici zawo nokuthi yiziphi izingozi ezingavela.
1 Izimpawu ebusika
2 Ukwakhiwa kwama-icicles
3 Ama-Condiciones ambientales
4 Izingozi ezingaba khona
Sizibonile impela izinguzunga zeqhwa kumabhayisikobho, ochungechungeni, emakhathuni, emakhadikhadi nasezindaweni eziningi. Awudingi ukuthi uzibone mathupha ukuze wazi ukuthi zinjani. Kuyinto yakudala yobusika obubandayo futhi ikakhulukazi ngenxa yokwehla okuqhubekayo kwamanzi oketshezi kuhlangene ne- isithwathwa esinamandla esijwayelekile salesi sikhathi sonyaka. Siyazi ukuthi ngesikhathi sasebusika amazinga okushisa ehla kakhulu, ikakhulukazi ebusuku. Ukuconsa okuqhubekayo kwamanzi oketshezi ophahleni lwendlu ngesikhathi sesiqephu semvula kubangela ukuba kwakheke ama-icicles.
Ngenxa yokwehla okungazelelwe kwamazinga okushisa kuya emazingeni angaphansi kuka-0 degrees singathola izimo ezifanele zokwakheka kwe-icicle. Okungukuthi, lapho izinga lokushisa kwemvelo lingaphansi kwezingu-0 degrees futhi lina noma lina, Ama-Icicles angakheka ekuconseni okuqhubekayo kwamanzi oketshezi. Lezi yizici ze-ice stalactites ezibizwa ngokuthi ama-icicles.
Ngokuvamile emadolobheni ama-icicles akha ama-eaves ophahla. Kuyadingeka ngaphambili ukuthi ukuthwale. Ngale ndlela, sizobe siqinisekisa ukuthi izinga lokushisa liphansi kakhulu. Amanzi nawo ngokuvamile aqoqana phezu kwezindlu, bese enza ama-icicles. Ukuncibilika okuncane kweqhwa okwenzeka ngesikhathi esiphakathi sosuku kuze kube kuphakamisa imifudlana eminingi yamanzi ngaphansi kwengubo emhlophe yeqhwa. Lapho amazinga okushisa ehla ebusuku futhi le migqa yamanzi iphelela emaphethelweni ama-eaves ophahleni, iqala ukuphola ize iqine ibe yiqhwa.
Lapho kuhwalala, amakhaza abanda kakhulu abangela uqweqwe lweqhwa lwakhe eqhweni elisophahleni kanti ingxenye engaphakathi yaleyo ngubo iqheleke ngokuphelele emfuleni. Le yindlela ingxenye yangaphakathi eqhubeka nokugeleza ngayo ngaphansi. Amaconsi abangelwa agcina encibilika noma edlula ama-eaves aze aqandeke futhi ngokushesha. Futhi kungenxa yokuthi ahlangana nomoya wangaphandle, okushisa okuphansi kakhulu futhi akhiwa ngokuhamba kwamahora. Yile ndlela okwenziwa ngayo izinaliti zeqhwa ezicijile ezifana nobusika.
Kujwayelekile impela ukuthi phakathi nesikhathi sasemini isibhakabhaka singasuswa bese izinga lokushisa lisheshe lisheshe. Ngale ndlela, ezinye izinaliti zeqhwa ezakhiwe emihubheni yophahla zingasuswa lapho zikhanyiswa yilanga noma zincibilikiswe ukushisa. Lokhu kudala ingozi kubantu abadlula ngaphansi kophahla. Ngezikhathi ezithile, abantu ababehamba ngaphansi lapho ama-icicles ewa babulawa yi-icicles. Lolu hlobo lwezindaba lwenzeka cishe njalo ebusika emazweni abandayo kakhulu njengeRussia lapho amakhaza amakhulu evame ukukhiqiza lolu hlobo lokwakheka ophahleni.
Ayaziwa nje kuphela ngegama le-icicles, kepha kuya ngokuthi sitholakalaphi kungaziwa ngamanye amagama. Ngokuya ngokuthi ukuphi kukhona uhlu lwamagama esithola phakathi kwawo izigaxa, ama-chipilete, ama-pinganiles, ama-candelizos, ama-calambrizos, ama-rencellos, amaswidi noma amaswidi. Lapha eSpain enkabeni yeCantabria ibizwa nge-cangalitu noma i-cirriu ngenkathi esigodini saseRoncal ibizwa nge-churro yize igama elixaka kakhulu yi-calamoco. Kusho ifinyila eliwa kube sengathi lishibilika phansi ekhaleni. Lokhu futhi kujwayelekile kakhulu ochungechungeni lwamakhathuni lapho amafinyila asekhaleni lalabo bantu eba yiqhwa lapho ebanda kakhulu.
Izingozi ezingaba khona
Ama-icicles awakhi nje kuphela endaweni esophahleni lwedolobha, kodwa futhi akhiqizwa ngemvelo. Siyabona kwamanye amawa, amatshe, amagatsha ezihlahla, njll. Zenziwa kanjani lezi zinalithi zeqhwa. Ekugcineni, sithola isilinganiso esithile sobungozi kusuka ku-icicles kuphela uma senziwa emadolobheni. Ezimweni zemvelo sinokwakheka kwamathafa amahle afanele ukusindiswa ezithombeni.
Kodwa-ke, emadolobheni bangaba nengozi. Ngokuqongelela kweqhwa ophahleni kanye nencibilikisi elandelayo esiyikhulume ngenhla, amaconsi ayapholisa ngenxa yamazinga okushisa aphansi. Uma kuphakama amazinga okushisa futhi, lezi zinalithi zeqhwa ziqala ukuwa futhi kulapho-ke zidala ubungozi kubahamba ngezinyawo. Ezweni lethu kwenzeka ngendlela eqhelile kwazise kasivamisile ukuba namazinga okushisa aphansi kangako ebusika. Kodwa-ke, ngemuva kwesiphepho sasebusika njengalo nyaka wezintambo, lezi zingozi zingavela.
Kulinganiselwa ukuthi cishe i-100 ngonyaka eRussia babulawa yi-icicle shed. Kwamanye amazwe afana neFinland kunezibonakaliso ezakhiweni ezixwayisa ngengozi yokuba khona kwalesi simo. Kwezinye izindawo kubhekwa njengeqhwa lokufa ngoba nakho kunokwehluka. Baqala ukukhuluma ngakho ngo-1947 lapho kwenzeka isimanga ekujuleni kolwandle. Kwenzeka amanzi abandayo kakhulu e-Arctic noma e-Antarctic Ocean lapho amazinga okushisa enweba afike ku -20 30 °. Ukushisa kolwandle kuphakeme njengoba amanzi angaphezulu eqandayo. Ngale ndlela, usawoti ushiywe ngaphandle kwale nqubo futhi ucwilisiwe ngoba ukuminyana kwawo kuphakeme. Amanzi azungezile aqina futhi ikholomu yenziwa kwakuyi-stalactite evimbela amanzi lapho ihlangana khona.
Ibizwa ngokuthi i-icicle yokufa ngoba iqina konke okusendleleni yayo. Uma ehlangabezana nesilwane esihamba kancane, ekugcineni uzosimamisa.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngama-icicles nezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izimpawu